SOM-J/Land-“Kisima”-(XOG)-Dagaalka Saaka-ka Dhacay…. Duleedka Kismaayo Oo-Been-Laga-Sheegay!!…Warbixin-Sugan… | Allkisima.com
SOM-J/Land-“Kisima”-(XOG)-Dagaalka Saaka-ka Dhacay…. Duleedka Kismaayo Oo-Been-Laga-Sheegay!!…Warbixin-Sugan…
Kismaayo🙁Allkisima)-Ilo Muhiim Ah Oo lagu Kalsoonyahay ayaa sheegaya dagaalka dhex-maray Malleeshiyada Al-shabaab iyo ciidamada J/land in ay ku geeriyoodeen ciidamo gaaraya 6-Askari kaliya.
Lixda Askari ee ku geeriyooday dagaalka ayaa waxaa inoo xaqiijiyey dadka deegaanka in ay ka tirsanyihiin labada dhinac 3 & 3.
Dhanka kale waxa ay wararku tibaaxayaan in malleeshiyaadka Al-shabaab laga dilay oo seddex ahaa in meydkoodii looga soo tagay goobihii lagu dagaallamay goob U-dhow Halka kuwii-Maamulka ka tirsanaana la soo qaaday oo lagu duugay aagga haanta biyaha.
Dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in 13-Askari oo ka tirsan in laga dilay al-shabaab taasoo iyadana been noqotay oo ay tahay BEEN.
Ugu dambeyntiina wararka sugan ee aan helnay ayaa sheegaya in dagaalka uusan dhaafsiisneen Ex- Dugisigii farsamada gacanta ee lugloow,waxaana uu socday muddo 45-daqiiqo ah.